Hapana Munhu: Christina Morris
Texas Mukadzi Akaparara muMall Parking Garage
Musi waAugust 30, 2014, Christina Morris we Fort Worth, Texas, akanyangarika kubva mune imwe nzvimbo yemotokari garaji mushure mekushandisa manheru manheru kushanyira neshamwari muPlano. Yakanga iri mazuva mashomanana asati aziva kuti akanga asipo.
Heino mamiriro ekupedzisira zvikuru munguva yenyaya yaKristuina Morris:
Mvere dzeSvondo Dzinopera Dambudziko Arochi
Gumiguru 28, 2015 - Kutongwa kwemurume ari kupomerwa kuti akunda Fort Worth mukadzi anobva kuPano, Texas shopping centre munaAugust 2014 yakambomira kuitira kuti vatsvakurudzi vagone kushandisa DNA kuongorora pamisoro yebvudzi.
Enrique Arochi akanga atarirwa kuzotongwa munaNovember 30 nokuda kwokubatwa kwaKristuina Morris, asi mutongi akakurumidza kutongwa kusvikira munaJune 2016 kuti ape vatsvakurudzi veTexas Department of Safety nguva yekuongorora mvere dzekudzikinura kubva pakuchenesa umo Arochi akashanda .
Mapurisa anotenda kuti Arochi akashandisa chivharo kuti achenese gore rake ra2012 Chevy Camaro nguva pfupi mushure mekunge aonekwa achifamba naMarris muchitoro chekupaka paThe Shops at Legacy muPano. Mamwe vhudzi aibva ku Morris akawanikwa mumugomo weCamaro uye padhesi mukati meti, zviremera zvakati.
Vatsvakurudzi vakawana humwe humwe mukati memuchenesi wekuchenesa pane imwe nzvimbo yeSprint apo Arochi aiva maneja uye paakazviratidza kwemaawa akawanda mushure mokunge Morris atadza.
Mapurisa anotarisira kuti DNA iongorore bvudzi rinotora masvondo gumi nemaviri.
Morris, ane makore makumi maviri negumi nemashanu, akatongerwa kubatwa zvakanyanya mumhosva. Akange ari mujeri asina kusungwa achimirira kutongwa kubva muna December 2014.
Amai Vanoramba Vatsvaga Christina Morris
Aug. 30, 2015 - Gore rimwe mushure mekunge mukadzi weTexas ane makore 23 akanyangarika mushure mekunge apinda mune mall parking garage mushure mekushanyira shamwari muPano, amai vake havana kumbomira kutsvaga. Jonni McElroy, amai vaKristuina Morris, vanoronga kupfuurira kusvikira mwanasikana wavo awanikwa.
McElroy akaudza vatori venhau gore mushure mechiitiko icho chaanovimba kuti murume anopomerwa mhosva yokubvisa mwanasikana wake rimwe zuva acharatidza kuti ari kupi.
"Handisi kuzomira kutsvaga," akadaro McElroy. "Ndingadirei?" Hapana chikonzero, ndicho chikonzero chete apo ini ndinomuwana kana kuti ndine mhinduro. "
Akataura kuti anotenda Enrique Arochi, aimbova mukomana waunodzidza naye kuMorris uye murume akapomerwa mhosva yokubata kwake, anoziva kuti mwanasikana wake ndiani.
"Iko tariro yangu kuti iye pakupedzisira anotaura chimwe chinhu," akadaro McElroy.
Maererano nedare remabhuku, vatsvakurudzi vanodavira kuti Arochi akasiya garaji yekupaka paThe Shops at Legacy muPano pamwe naMorris muchitokari chemotokari yake. Ropa rake nemateve zvakawanikwa pamucheto wemutokari wemotokari.
Serofoni yake yakanga iri kutarisa zvakasiyana-siyana shongwe dzesero paakanga ari mukati memotokari yemotokari yake, mapurisa akati. Vanotenda kuti akadzokera kugaraji rekupaka naMarris achiri muchitokisi ndokubva adzokera kumba kwake 40 maminiti gare gare.
Vakuru vanotenda kuti Arochi akaronga kuita zvepabonde Morris uye akatsamwa paakaramba kufambira mberi kwake.
Arochi akachengetedza kusava nemhosva kwake, uye gweta rake rakati nyaya yemapurisa yezviitiko "inowanikwa zvikuru mukufungidzira uye kufungidzira, uye kusiya mibvunzo yakawanda isina kupindurwa."
Inzwa inotevera munyaya yacho yakarongwa musi waNovember 30.
Guru Guru rinoratidza Arochi
Mar. 10, 2015 - Anoshungurudzika mukunyangarika kweForth Worth mukadzi ave akatongerwa neCollin County juri guru pamhosva mumatambudziko maviri akasiyana. Enrique Arochi, ane makore makumi maviri negumi nemana makumi mana nemashanu, akatongerwa mhosva yekubatwa kwechikwata muKristina Morris, uyo akaparara musi waAgasti 30.
Arochi akatongerwawo nezvekurwisana kwepabonde nemhosva yakabva kune hukama hwepabonde hwaaiva nemusikana ane makore 16 pakati paOctober 22, 2012, uye Feb. 22, 2013.
Maererano nedare rematare, Arochi akaudza musikana kuti aiva nemakore makumi 19 nemakore paaiva nemakore makumi maviri nemaviri. Iye ari kubata pa $ 100,000 musungo pamubhedha wepabonde.
Arochi iri pasi pe $ 1 mamiriyoni ehutano hwekuwedzera kukunda kutora.
Murume Akabatwa muna Christina Morris Case
Dec. 13, 2014 - Murume uyu akapedzisira aona pavhidhiyo yevhidhiyo achipinda garaji rekupaka nemukadzi weTexas akange akasungwa maererano nezvenyaya yacho.
Zviremera zvakataura zvisinganzwisisiki mazwi uye DNA yakaunganidzwa panguva yekutsvakurudza kwakaita kuti kusungwa kwaEnrique Gutierrez Arochi mukuparara kwaKristuina Morris.
Arochi, ane makore makumi maviri namashanu, uyo aiva shamwari yepamusoro yeMorris, akapomerwa mhosva yekubatwa kwechisimba , yekutanga-degree felony.
Morris naArochi vakanga vachifambidzana nevamwe shamwari muPlano, Texas usiku hwaakapera. Vakasiya pato pa3: 45 musi waAugust 30 uye vakatorwa pavhidhiyo vachipinda garaji rekupaka pamwe chete pa3: 55 mangwanani
Kunyange zvazvo vaongorori vakaratidzira Arochi mufananidzo waiye iye naMorris mugaraji, akaramba kuti vakanga vari munzvimbo yekupaka pamwe chete.
Maererano nechisungo chekupihwa chibharo, DNA uchapupu hunoratidza kuti Morris akasiya garaji rokupaka mumotokari yemotokari yaArochi. Dhiyabhorosi kubva kune foni yake inoratidzawo kuti akanga ari mumotokari yake, kunyange zvazvo akaudza mapurisa kuti akanga asati ari mumotokari.
Paiva nezvimwe zvinopesana mumashoko ake kumapurisa:
Arochi akati Morris akanga achikakavadzana nemukomana wake pafoni sezvavakapinda mugaraji, asi foni yake yakashandiswa kunyorera mukomana wake pa3: 50, uye 3:55 mangwanani.
Arochi akati anofanira kunge akazvipira chikwereti Morris ari foni nokuti hers akanga asiri kushanda, achizvipikisa pachake, maererano nematare ematare
Akati akafambisa zvakananga kumba kubva kugaraji, asi zvinyorwa zveToll zvinoratidza kuti akatora nzira yakasiyana ino kuenda kuEllen, Texas kumba.
Akaudza vatambi kuti Morris akanga asina kumbove mumotokari yake. DNA yakaunganidzwa panguva yekuongorora ingangopesana nemashoko iwayo.
Akarevera mapurisa nezvekuti kuguma kwaro kweKevy Camaro yake kwakange kwakakuvara sei, maererano nevanodzidzira muviri kugadzirisa muviri.
Maererano nechitsiviso chakaiswa munyaya yacho, Arochi akafamba nechirwere paakazviratidza kuti aite basa mushure mevhiki uye akaudza mushandi kuti mbabvu dzake dzinokuvadza. Mushandi uyu akaona chiratidzo chekurova pamusoro peArochi ruoko rwaakazvidza pakurwisana usiku hwakatangira.
Arochi iri kubatwa muCollins County Jail pa $ 1 Million bond. Apo iye ariwo kune hurumende inopinda kune dzimwe nyika, vakuru vakuru vakati.
Mukomana Wemukadzi Anoshayikwa Akabatwa Zvinodhaka
Dec. 10, 2014 - Mukomana wemukadzi ane makore 23 muTexas, uyo akaparara pasi pemamiriro ezvinhu akashungurudza munaAugust, akatongerwa pamhosva dzezvinodhaka izvo zviremera zvakati hazvina kufanana nekuparara kwaKristuina Morris.
Hunter Foster, uyo mapurisa akati ane anebi yeusiku apo Kristuina akanyangarika muPlano, ave akatongerwa pamwe nevamwe vanhu 14 pazvinodhaka zvekushandisa zvinodhaka . Mhosva idzi dzine chokuita nekutengeserana kwezvinodhaka.
Foster akasungwa nechokumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwebhuruti reDallas apo kushanda kwemaawa mashoma kuchiitika, maererano nemapurisa.
Nhengo dzemhuri dzakaudza zviremera kuti Christina akanga atsamwiswa nemishonga yePilster uye akanga atyisidzira, nguva pfupi asati apera, kumusiya nekuda kwayo.
Panguva iyi, vatsvakurudzi vave vachitarisa muchikoro chesekondari shamwari yaChristina uyo aive achionekwa achifamba achipinda mupaki yepaki yekupano pamwe naye usiku hwaakanyangarika musi waAugust 30. Enrique Arochi akati avo vaviri vakafamba nenzira dzakasiyana mushure mokupinda garaji, asi motokari yaChristina yaiva akawanikwa asina kumira mugaraji.
Mapurisa anotenda chete nzira iyo Christina angadai akasiyira garaji isingatauriki nekutarisa makamera yaiva mumotokari yaArochi.
MunaSeptember, vakakumbira mvumo yekutsvaga motokari yaArochi, vachitsva mubvumirano kuti iye akaita nemaune zvinyorwa zvenhema izvo zvakadzivisa vaongorori mukuwana Morris. Uyewo muhurukuro, vatikiti vakati motokari yaArochi yakanga yakashata uye yakanga ichangobva kunyatsotsanangurwa.
Fort Worth Woman Akapupurirwa Asina
Sept. 6, 2014 - Plano, mapurisa eTexas akakumbira rubatsiro rwevanhu mukutsvaga mukadzi we Fort Worth mukadzi akapera mushure mekufamba muchitoro chekupaka pamwe neshamwari pedyo nechitoro chamusi weMugovera, Aug. 30, 2014.
Christina Marie Morris, 23, uyo akanga achishanyira shamwari dzake muPlano, akazopedzisira aonekwa pedyo neThe Shops At Legacy uye achifamba neshamwari mumagaraji ekupaka pa 5717 Legacy Drive mangwanani oMugovera mangwanani. Iye neshamwari yake vakamira pamativi akapoteredza egaraji uye vakafamba munzira dzakasiyana nguva pfupi mushure mokupinda mugaraji; shamwari yacho yakaudza mapurisa.
Mapurisa Akabudiswa Kuona Video
Mapurisa epanopi akabudisa vhidhiyo yevhidhiyo yevaya vaviri vachifamba muchitoro chekupaka gore rinenge risati rasvika
"Murume (muvhidhiyo) ishamwari yake kubva kuchikoro chesekondari." Vakanga vari paimba yemuvakidzani vakanamatira kunze uye vakadzoka zvakare pamwe chete, "mutauriri wemapurisa wePanoti David Tilley akaudza vatori venhau.
Yakasarudzwa Kusina Chipiri, Sept. 2
Kunyange zvazvo akazoonekwa pakupedzisira 4 am Aug. 30, zvakatora mazuva mashomanana kune shamwari neshamwari kuti vaone kuti akanga asingadzokeri kudana kwemunhu uye hapana ainge ataura naye. Somugumisiro, vabereki vake havana kuisa vanhu vanoshaya mushumo pamusoro paMorris kusvikira Chipiri, Svondo 2.
Mapurisa akakurumidza kuwana motokari yaMorris ichiri mumagaraji ekupaka. Vanoti foni yake inogona kubviswa kana bhatiri rayo rafa. Kushandiswa kwekupedzisira kwefoni yake kwaive kwakatarwa kune The Shops At Legacy mall.
Kubvisa Shopping Shopping
Vhiki ino, amai vaMorris, Jonni McElroy, vakaenda kumisika uye vakatengesa vatengesi vaine tarisiro yekuwana ani zvake aifambidzana naMorris vasati vanyangarika.
"Ini handisi kusiya." Handisi kuzosiya pano kusvikira ndawana zvinyorwa zvekuwana mwanasikana wangu, "akaudza vatori venhau.
Boyzvadzi yaMorris zvakare yakabatanidzwa mukutsvaga vhiki ino, kutendeukira kumagariro evanhu kuti vatsvake rubatsiro mukumuwana.
Achishandisa Social Media
"Ndiri kurwara kunetseka uye ndichaita chero chinhu chipi zvacho kuti ndiwane chero ruzivo rwekupedzisira nguva iyo munhu aona kana kuti achitaura naye ndapota tibatsire uye tinyengetere kuti akanaka," akadaro pa Facebook. "Mapurisa anobatanidzwa, uye tiri kumuwana iye uye ani zvake akamutora kana ani zvake aine."
Zviri pachena kuti kuedza kwake kwakabatsira apo vazvipiri vanopfuura 60 vakapinda musi weMugovera, Sept. 6, kutsvaga nzvimbo dzakapoteredza The Shops At Legacy mall.
Volunteers Tsvaga Mall Area
Kushanda nemapurisa eChipano, vazvipiri - vanotsanangurwa semhuri, shamwari, neshamwari dzevamwe - vakarongerwa mumapoka evanhu vana kuti vatsvake masango, madutu uye dutu rinopisa kumativi ose emall uye garaji. Vakanga vachitsvaka chero chiratidzo cheMorris kana chimwe chezvinhu zvake.
Boka rega roga revashandi vana vaisanganisira mapurisa eChipano, Tilley akati.
August 30 Mufananidzo Wakaratidzwa
Mumufananidzo wakaumbwa waMorris kumusoro, mufananidzo kubva papeji yake Facebook inowanikwa kuruboshwe, apo mufananidzo uri kurudyi ndeyeti mapurisa anoti akaitwa usiku hwaakanyangarika, kuratidza kuti akatarisa uye chii chaakanga akapfeka.
Morris anorondedzerwa se 5'-4 "uye makirogiramu 100. Ane maziso ane mavara uye bvudzi rakachena.
Chero ani ane ruzivo pamusoro pemhosva yacho anokumbirwa kudana Mapurisa eChipano pa 972-424-5678.
Dallas Nhau: Vazvipiri Vanobatsira Plano Mapurisa Anotsvaga Anoshaiwa Fort Worth Woman
CNN: Mhuri Inotsvaka Mhinduro muTexas Kuora Mukadzi
Vana Vanouraya: Alex naDerek King
Nhoroondo yeComputer Printers
Mashoko Anogadzirisa Tsanangudzo uye Mienzaniso
UNC School of the Arts GPA, SAT uye ACT Data
Imwe Mapurogiramu Emapuraneti Okugadzirwa Kwepamba Pamusoro kweAra Architects DIY
Top Italian Dictionaries
Rubatsiro! Kwete Hushandi muTaurus yangu! (kana Sable)
Zvivakwa uye Zvirongwa naRichard Rogers Partnership
Kuchengetedza Mhinduro muChikafu 2013
Tsvaga Tsanangudzo yeContemporary Art
Top War Movies Movies Rinoonekwa Kubva Muvengi WePfungwa
Sangana naMutumwa mukuru Tzaphkiel, Angel of Understanding uye Compassion
Nguva Yekuti Ushandise Pane Uye Zvino
Nguva Yakatarwa uye Tsika dzePottery yeRoseville
Mazuva Ano Biographies, Autobiographies uye Memoirs for Teens
Shona-German Glossary: ​​In der Schule - At School
Ndezvipi-Nzira mbiri dzeChikorical Variables?
Nzira 4 dzekubatanidza mapurisa kumapango ako
Boating Kudzivirira Mitemo yeBhoti 26 kusvika pasi pemakumbo makumi mana
Chii chiri mukati meSand Dollar?
Kuwedzera Zvirevo Zvine Zvinyorwa Zvokutanga